घरमा यी विरुवा लगाउनुहोस्, राता-राता बढ्नेछ धन ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/घरमा यी विरुवा लगाउनुहोस्, राता-राता बढ्नेछ धन !
घरमा यी विरुवा लगाउनुहोस्, राता-राता बढ्नेछ धन !
काठमाडौं- घर वरिपरि रुख तथा विरुवा लगाउनु निकै ला’भदायक हुन्छ। घर वरिपरि बोट विरुवा लगाउँदा वातावरण त स्वच्छ रहन्छ नै हाम्रो मा’नसिक स्वास्थ्यलाई पनि फा’इदाजनक हुन्छ। वास्तुमा पनि बोट विरुवाको महत्व उल्लेख छ ।के तपाईंलाई थाहा छ वास्तुमा यस्ता विरुवाको बारेमा बताइएको छ जुन विरुवा लगाउँदा घरमा धनको वर्षा हुन्छ। वास्तुमा केहि विरुवालाई घरमा सुख-समृद्धि ले’राउने विरुवा मानिन्छ। तपाईं आफ्नो घरमा यी बोटहरू लगाएर धन अ’भावलाई पनि ह’टाउन सक्नुहुन्छ।
मनी प्ला’न्टको बारेमा त प्राय: मानिसलाई थाहा नै होला। धेरै मानिसले आफ्नो घरमा मनी प्ला’ट लगाएका पनि हुन्छन्। यो बोटको बारेमा भनिन्छ कि जब बिरूवा ब’ढ्दै जान्छ घरमा धन तथा समृद्धि पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। यसलाई घरको अग्लो ठाउँमा लगाउनु पर्छ। जुन घरमा यो विरुवा हुन्छ, त्यहाँ धनको अ’भाव हुँदैन। वास्तुमा शमीलाई एकदमै शुभ र खुशी र समृद्धि दिने वाल मानिन्छ। बेलपत्र बाहेक शमीको पातहरू पनि शिवलाई चढाइन्छन्। यो शिव जीलाई मनपर्ने विरुवा हो। यसलाई घरमा लगाउनाले ग’रीबी न’ष्ट हुन्छ।
प्रत्येक सोमबार, शंकर जीलाई शमी पात चढाउनु निकै शुभ मानिन्छ। यसले घरमा स’मृद्धि ल्या’उँछ र ग’रीबी ह’टाउँछ। अ’श्वगन्धालाई आ’युर्वेदमा धेरै म’हत्त्वपूर्ण मानिएको छ, वास्तुका अनुसार यसले घरमा सुख तथा समृद्धि प्रदान गर्छ। यसको फूलहरू पनि भगवानलाई च’ढाइन्छ। यसको विरुवा घरमा लगाउँदा धन सम्बन्धित स’मस्याहरू स’माप्त हुन्छ।
पुरुषको लागि महत्वपुर्ण टिप्स: महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी कुराहरु